I-Times Square, Iphephile, Ihlanzekile futhi Ithokomele! - I-Airbnb
I-Times Square, Iphephile, Ihlanzekile futhi Ithokomele!
Ikamelo e-iyunithi yokuqasha ibungazwe ngu-Luiz
Ikhululekile futhi ithokomele. Umatilasi we-memory foam omangalisayo. Igumbi lincane kodwa linekhabethe elitholakalayo.
Indawo ekahle yokuhlola i-NYC ngezinyawo. Hamba ibanga uye ezindaweni eziningi ezikhangayo zaseManhattan
Leli fulethi linekhishi namagumbi okulala amabili, elilodwa elinombhede ogcwele, nelilodwa elinombhede wendlovukazi. Kunamafasitela amakhulu, anikeza ukukhanya kwelanga okuhle! Ishawa nosinki kungaphakathi kwefulethi futhi indlu yangasese itholakala kalula ngaphandle kwe-apt ephasishi, futhi isetshenziselwa ukusetshenziswa kwalokhu kufaneleka kuphela. Ikhishi lifakwe isitofu, i-silverware, i-microwave, i-coffee maker, i-blender, amathelevishini amabili, ama-Air Conditioner amabili kanye nosofa wesikhumba othokomele kakhulu. Kukhona ukuxhumana okusheshayo ku-inthanethi nge-WIFI kuyo yonke indawo.
Ikhishi lingasetshenziselwa ukupheka ukudla kwasekuseni kuphela, futhi liyatholakala ukuze kudliwe isidlo sasemini nesakusihlwa, kodwa hhayi ukupheka lokhu kudla. Nokho, iMicrowave ihlala ikhona!
Ifulethi lisendaweni Engcono Kakhulu yeDolobha laseNew York, khona kanye enhliziyweni yakho konke, yizinyathelo eziya endaweni edumile ye-Times Square kanye nethiyetha.
I-Times Square iyindawo enkulu yezohwebo eMidtown Manhattan, eNew York City, e-USA, enhlanganweni ye-Broadway kanye ne-Seventh Avenue futhi esukela eWest 42nd kuya eWest 47th Streets. I-Times Square, ekhonjwe ngokuthi "I-Crossroads of the World" kanye "Nendlela Emhlophe Enkulu", iyindawo ekhanyiswe ngokugqamile yesifunda setiyetha sase-Broadway, esingenye yezindawo ezimatasatasa zabahamba ngezinyawo emhlabeni, kanye nesikhungo esikhulu somkhakha wezokuzijabulisa emhlabeni. Ngokocwaningo lukamagazini i-Travel + Leisure ka-Okthoba 2011, i-Times Square iyindawo eheha izivakashi kakhulu emhlabeni, iletha izivakashi ezingaphezu kwezigidi ezingu-39 ngonyaka.
Ingasaphathwa eyokuthi ukuRestaurant Row, uziqhayisa ngezinhlobonhlobo zezindawo zokudlela zamazwe ngamazwe nezinhle kakhulu namakhefi.
Uzoba yizinyathelo ezisuka KUYO YONKE imigqa yesitimela esingaphansi neziteshi ezinkulu zezitimela namabhasi, zikushiye noma yikuphi eManhattan ngemizuzu nje.!
Lesi sikhangiso esegumbi elincane elinombhede ophelele.
Isivakashi sizoba nesethi yaso yokhiye be-apt!
I-Apt isezingeni lesi-2 ebhilidini elihambela phezulu
4.50 out of 5 stars from 450 reviews
4.50 · 450 okushiwo abanye
Ujoyine ngo-Disemba 2009
Iyatholakala uma isivakashi singidinga